सेक्स कति पटक र कुन समयमा गर्ने ? थाहा पाउनुस्
219300 पटक पढिएको
एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुने र विहानकै समयमा सेक्स गर्न उत्साह पैदा गर्ने गर्दछ । एउटा मात्र होइन, धेरै किसिमका सोध र अनुसन्धानबाट तपाईलाई स्वस्थ राख्न विहानको समय नै सेक्सको लागि उपयुक्त रहेको पत्ता लागेको छ । सबैभन्दा उत्तम समय भनेको विहान साढे ७ बजे हो ।
सेक्स कतिपटक गर्ने भन्ने लेखाजोखा त छैन । आवश्यकता अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । तर, भनिन्छ नी धेरै खायो भने चिनि पनि तितो हुन्छ । उपयुक्त समयमा र आफ्नो पार्टनरको मुड हरेर सेक्स गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले एकसातामा तीनपटक सेक्स गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । बिहानमा सेक्स गर्दा महिला र पुरुष दुबैमा प्रजनन क्षमता पनि बढ्छ । लेखिका जेनी ट्रिप्लेटका अनुसार विहानमा सेक्स गर्दा महिलाहरुलाई धेरै शक्ति प्राप्त भएको महसुस हुन्छ ।
बिहानको सेक्समा कसरी मजा लिने ?
समय छ र पार्टनर टेन्सनमा छैन भने बिहानमै सेक्स गर्दा रमाइलो हुने विभिन्न अनुसन्धानबाट खुलेको छ । बिहानको समयमा सेक्सको साथसाथै पार्टनरसँगै बाथरुममा ‘शावर’मा नुहाउदै मजा लिन पनि सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ । यसो गर्दा आफ्नो पार्टनरसँग अझै बढि आत्मियता प्राप्त पाउने मात्रै होइन रमाइलो पनि हुन्छ ।
बिहानमा सेक्स गर्ने तर रातीमा किन नगर्ने भन्ने जिज्ञासा लाग्न सक्छ । रातीमा खासगरी खाना खाएर बेडमा जाने र सुत्नेबेला सेक्स गर्छन् धेरैजसो जोडिले । तर, खाना खाएर सेक्स गर्नु र खाना खाएर नुहाउनु भनेको रोग निम्ताउनु हो । त्यसैले रातीमा सेक्स गनुभन्दा विहान मै गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरुको सुझाव छ । रातीको सेक्समा नयाँपन नहुने पनि बताउने गरिएको छ ।
३ देखि १३ मिनेटको सेक्स पर्याप्त
घण्टौंसम्मको सेक्सभन्दा ३ देखि १३ मिनेटको सेक्समै अधिकतम सन्तुष्टि मिल्ने अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । अमेरिकास्थित पेन स्टेट युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरूले आफ्नो अनुसन्धानबाट उक्त कुरा पुष्टि गरेका हुन् ।–एजेन्सी
आज जेठ १९ गते सोमबार देशभरको मौसम पूर्वानुमान
बाँकेमा सडक दुर्घटना : बस र ट्रक ठोक्किँदा १२ को मृत्यु, २१ घाइते